प्रचण्डको गल्ती : जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खसखस ! | Ratopati
personअरुण बराल exploreकाठमाडौं access_timeचैत २६, २०७७ chat_bubble_outline0
महात्मा गान्धीले भनेका छन्– आफैंले बाहेक मान्छेलाई कसैले हराउन सक्दैन । कार्ल मार्क्सले भनेका छन्– परिवर्तनको मुख्य कारण आन्तरिक हो, बाहिरी कारण सहायक मात्र हो ।
आखिर प्रचण्डको गल्ती के हो ? जबसम्म मानिसले आफ्नो ठोस गल्ती खुट्याउन सक्दैन, तबसम्म उसले आफूलाई सच्याउन सक्दैन ।
प्रचण्डका गल्ती खोतल्नुपूर्व रुकुमको आमसभामा उनले के भनेका थिए, एकपटक ‘रिभ्यु’ गरौं –
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रुकुमेली जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्ने क्रममा महसुस गरेका यी गल्तीहरु एक हदसम्म सही नै देखिन्छन् । तर, यो आत्मसातीकरणको व्यवहारिक कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।
यसबीचमा प्रचण्डले केही राजनीतिक गल्तीहरु पनि गरेका छन् । ती गल्ती नसुधारेसम्म अन्य भावनात्मक कुरा मात्र गरेर माओवादीको गुमेको साख फर्कन सक्दैन ।
खासगरी, पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता प्रचण्डले गरेका राजनीतिक गल्ती यस्ता छन् :
ओली सरकारलाई अझै समर्थन किन ?
केपी शर्मा ओलीबाट हदैसम्मको अपमान र धोका पाएर पनि प्रचण्डले अहिलेसम्म उनै ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाइरहेका छन् । यो समर्थनले प्रचण्डमाथि यक्ष प्रश्न उब्जाएको छ– यो समर्थन प्रचण्डको बुद्धिमानी हो कि मूर्खता ? कुन विश्लेषणका आधारमा प्रचण्डले अहिलेसम्म ओलीलाई नै समर्थन जनाइरहेका होलान् ? जगत आश्चर्यचकित छ ।
सँगै बस्न नसक्ने भइसकेपछि श्रीमान–श्रीमतीले सम्बन्ध विच्छेद गर्छन् । सम्बन्ध विच्छेदपछि कसले, कोसँग पुनर्विवाह गर्ला भन्ने विश्लेषण गरिँदैन । सँगै बस्न सकिँदैन भने श्रीमान–श्रीमती छुटिन्छन् ।
राजनीतिक आधारमै विश्लेषण नै गर्ने हो भने पनि माओवादीले ओली सरकारलाई समर्थन जनाइराख्दा माओवादीलाई होइन, ओलीलाई नै फाइदा छ ।
फागुन २३ लगत्तै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको भए अहिलेसम्म ओलीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने थियो । ओलीले जसपालाई फुटाएर बहुमत हासिल गरेको अवस्थामा पनि जसपा फुटेर माओवादीलाई घाटा हुँदैनथ्यो । जसपा नफुटी ओली सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि एउटै ‘कन्सिचुएन्सी’ भएको माओवादीलाई यसबाट लाभ नै हुने थियो । जसपा ओली सरकारमा सहभागी हुँदा बदनाम हुन गई मधेसको जनमत सो पार्टीले ‘लुज’ गर्ने निश्चित देखिन्छ ।
जसपाको साथ लिएर ओली सरकार थप दुई वर्ष टिक्न सक्ने विश्लेषणका आधारमा माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको सो पार्टीका केही नेताले बताउने गरेका छन् । तर, ओली सरकार जतिसुकै वर्ष टिकोस्, प्रचण्डले रुकुममा भनेजस्तै ‘प्रतिपक्षमा बसेर जनतामा जाने’ आँट नगर्दासम्म माओवादीको भविश्य छैन ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओलीले फेरि संसद विघटन गर्छन् र देशलाई चुनावमा धकेल्छन् भन्ने डर प्रचण्डलाई छ भने त्यो पनि वस्तुसम्मत विश्लेषण होइन । किनभने, अहिलेको अवस्थामा देश चुनावमा गयो भने केपी ओलीको जीत हुँदैन, हार हुनेवाला छ ।
प्रतिपक्षमा बस्दैमा राजनीति कमजोर हुने भए गएको तीन वर्षयता नेपाली काँग्रेस कमजोर बन्नुपर्ने हो, अहिले झन् बलियो बनेको छ । बरु सत्तामा बसेको एमाले कमजोर बनेको छ ।
आखिर के विश्लेषणका आधारमा माओवादीले ओली सरकारलाई समर्थन जनाइरहेको होला ? कसको बुद्धिले प्रचण्डले यसो गरिरहेका होलान् ? इमान र मूल्यको राजनीतिक गर्ने हो भने ओलीलाई समर्थन जनाइराख्नुपर्ने किन ? यो मूर्धन्य प्रश्न प्रचण्डसामु तेर्सिएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओलीले फेरि संसद विघटन गर्छन् र देशलाई चुनावमा धकेल्छन् भन्ने डर प्रचण्डलाई छ भने त्यो पनि वस्तुसम्मत विश्लेषण होइन । किनभने, अहिलेको अवस्थामा देश चुनावमा गयो भने केपी ओलीको जीत हुँदैन, हार हुनेवाला छ । पत्रकार महासंघको चुनावी रुझानले पनि ओलीको भविश्य संकेत गरिसकेको छ । बरु माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएका कारण ओलीलाई आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्न त्राण मिलिरहेको छ ।
प्रश्न केपी ओलीले के गर्लान् भन्ने होइन, यदि निष्ठाको राजनीति गर्ने हो भने प्रचण्डले यो प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ– आफैंले प्रतिगामी करार गरेको ओली सरकारलाई समर्थन किन ?
सर्वोच्चमा निवेदन हाल्न किन गएको ?
गतसाता प्रचण्डले नेकपाको मुद्दा उल्ट्याइदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरे । लगत्तै अदालतले प्रचण्डलाई पंगु बनाइदियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता उल्ट्याइदेला भन्ने प्रचण्डको विश्लेषण नै कच्चा थियो । राजनीति गर्ने नेताले यसरी निवेदन बोकेर हिँड्नु नै गल्ती हो । एक त अदालतले मुद्दा उल्ट्याउँछ भन्ने विश्लेषण नै गलत थियो, अर्को नेकपाको निर्णय उल्टिए पनि माओवादीलाई फाइदा केही हुनेवाला थिएन । किनभने, केपी ओलीसँग अझै मिलेर जान सकिन्छ भन्ने ठान्नु नै मूर्खता हो । फागुन २३ को फैसला नआउँदै नेकपा फुटिसकेको थियो ।
बरु, प्रचण्डले एमालेमा लगेर फसाएको माओवादी पार्टीलाई सकुशल ब्युँताइदिएकोमा सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिएको भए हुन्थ्यो । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई विश्वास गर्नुको साटो केही वकिलहरुका पछाडि लागेर अदालत धाउँदा प्रचण्डलाई फाइदाको साटो नोक्सान भयो ।
बेलैमा निर्वाचन आयोगमा दाबी किन नगरेको ?
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–माधव समूह र ओली समूहबीचको लडाइँ निर्वाचन आयोगमा चलेको थियो । पार्टीको वैधानिकता कसले पाउने भन्ने सो विवादमा ३० दिन कटेपछि मात्रै प्रचण्ड–माधव समूहले दाबी पेश ग¥यो । त्यसअघिसम्म ‘हामीसँग दुई तिहाई बहुमत छ, दाबी गरिँदैन’ भन्दै घमण्ड प्रकट गर्ने काम प्रचण्ड–माधव समूहले ग¥यो ।
तर, निर्वाचन आयोगमा बेलैमा दाबी प्रस्तुत गरेको भए सम्भवतः अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह एकै ठाउँमा हुने थिए । सकभर उनीहरुको पार्टी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हुने थियो । अहिलेजस्तो खुम्चिएर बस्नुपर्ने थिएन । तर, त्यसबेला समयमै, सही स्टेप चाल्न प्रचण्डले भूल गरे ।
अरुको पुच्छर समाउने कि आफ्नै खुट्टामा उभिने ?
तीन वर्ष पहिले एमालेसँग एकता गरेदेखि नै प्रचण्ड आफ्नो स्वतन्त्र पहलकदमीमा कमजोर देखिन थालेका हुन् । अहिलेसम्म उनी आफ्नै जगमा बनेको पार्टीको पुनर्निर्माणमा भन्दा बढी एमालेमा माधव नेपालीहरुसँगको गोप्य बैठकमा अल्मलिँदै आए । आफ्नै बलबुँतामा माओवादी पार्टीलाई पुनर्जाग्रित गर्न सक्छु भन्ने विश्वास नभएकैले उनले अरु दलको पुच्छर समाउन खोजेको देखिन्छ ।
गतसाता नेपाली कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्ने र सरकारको नेतृत्व आफूले लिने निर्णय गर्नासाथ कपिलवस्तुबाट प्रचण्डले खुशी व्यक्त गर्दै अब चाँडै नयाँ सरकार बन्ने उद्घोष गरे । साथै, आफूले काठमाडौं फर्केर कांग्रेस र जसपाका नेताहरुसँग छलफल गर्ने बताए । प्रचण्डको यो खुशी पनि बेकारकै हो । माओवादी पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल होइन ।
नेकपासँग एकता हुनुपूर्व स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग गरिएका तालमेल हुन् या त्यसपछि एमालेसँग मिलेर चुनाव लडेका घटनाहरु हुन, यसले माओवादीलाई स्वतन्त्र भूमिकामा भन्दा परनिर्भर बनाउँदै लग्यो । त्यसको नतिजास्वरुप अहिलेसम्म प्रचण्ड अरुको पुच्छर समाउनेतिर बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
एमाले विभाजित बनेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको विकल्प बन्ने गरी चुनावी मैदानमा जाने र त्यसको पूर्वतयारी गर्ने आँट अहिलेसम्म प्रचण्डमा देखिँदैन । एउटा चुनाव हारिएला, तर विचारलाई बचाइराख्ने हो भने १० वर्षपछिको चुनाव जितिन्छ भन्ने धैर्यता र विश्वास पनि प्रचण्डमा गुमेको देखिन्छ ।
भारतको बीजेपी १० वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर शक्तिमा फर्किएको हो । अमेरिकाका पार्टीहरूमा पनि यस्तै हुने गर्छ । तर, प्रचण्डमा चाहिँ टाकटुक मिलाएर अहिल्यै सरकारमा गइहाल्ने सत्तावादी चिन्तन हावी भयो । सत्तामा नभएसम्म राजनीति अघि बढ्दैन भन्ने गलत चिन्तन देखियो ।
जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खसखस !
गतसाता नेपाली कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्ने र सरकारको नेतृत्व आफूले लिने निर्णय गर्नासाथ कपिलवस्तुबाट प्रचण्डले खुशी व्यक्त गर्दै अब चाँडै नयाँ सरकार बन्ने उद्घोष गरे । साथै, आफूले काठमाडौं फर्केर कांग्रेस र जसपाका नेताहरुसँग छलफल गर्ने बताए ।
प्रचण्डको यो खुशी पनि बेकारकै हो । माओवादी पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल होइन । सरकारको विकल्प दिने भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हो । ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ ले हो । माओवादी त संसदको तेस्रो दल हो ।
ओली सरकारको विकल्प खोज्दै मरिहत्ते गरेर हिँड्नुभन्दा आफ्नो पार्टी संगठनको विस्तारमा लाग्नु माओवादीका लागि अहिलेको आवश्यकता हो । यत्ति हो, प्रमुख प्रतिपक्षले सहयोग मागेको खण्डमा माओवादीले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।
‘जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खसखस’ भनेजस्तो दौडधूप गरेर नयाँ सरकारको पहल गरेर माओवादीलाई फाइदा हुने देखिँदैन । प्रचण्डले आफ्नो दलबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी नरहेको बताइसकेकै छन् ।
अन्त्यमा, फेरि एकपटक प्रचण्डले रुकुममा भनेको सम्झौं– ‘.... अहिले के भन्न खोजिएको छ भने प्रचण्ड अब कमजोर भइसक्यो, अब प्रचण्डलाई जनताको साथ छैन । अब प्रचण्डले केही गर्न सक्दैन.....।’
गान्धीले शायद ठीकै भनेका हुन्– आफैंले बाहेक मान्छेलाई कसैले हराउन सक्दैन....।